Indlu yeParadesi yaseMelika (Iyunithi #1) - I-Airbnb
Indlu yeParadesi yaseMelika (Iyunithi #1)
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMarivic
Wamkelekile kwindawo yakho yokubalekela kwiparadesi yaseMelika enemibono emangalisayo yolwandle! Indlu yethu ikwipropathi enoxolo yabucala encotsheni yeCapitol Hill kwimizuzu nje ukusuka kwiilwandle ezidumileyo zaseSaipan, iindlela ezimangalisayo zokuhamba, iindawo zokutyela ezikumgangatho wehlabathi, kunye nokuthenga.
NCEDA UQAPHELE: Asinakukwazi ukuhlalisa ukuphuma kade okanye ukungena kwangethuba ngenxa yemfuno ephezulu kwaye indlu idla ngokubhukishwa. Nangona kunjalo, sinokulungiselela ukugcina imithwalo yakho.
Ugcino lolwabantu aba-4. Yi-$20 ngosuku kumntu ngamnye owongezelelweyo.
Vuka uhlaziyekile kumbono wechweba lethu eliluhlaza okwesibhakabhaka, igadi yeorchid, kunye nezityalo ezichumileyo ezikungqongileyo! Indawo yethu ekhethekileyo ibekwe phezulu ngaphezulu kweCapitol Hill kwaye kukuhamba nje okufutshane ukuya kwindawo yedolophu yaseSaipan kunye nezinye iindawo eziphezulu.
Ikhaya leendwendwe lethu linezi ncedo zilandelayo
Umoya womoya onamandla
IKHISHI: umenzi wekofu, iketile yeti, imicrowave, amanzi okusela, izitya & nesilivere, iimbiza & neepani, isitovu, izinongo, kunye nefriji enkulu(URL HIDDEN)
Igumbi lokulala #1: ibhedi enkulu
IBHAFU #1: encanyathiselwe kwigumbi lokulala #1 elineshawari yokuphulula obutofotofo
Igumbi lokulala #2: ibhedi elingana nokumkanikazi enendawo yabucala
IBHAFU #2: ishawari ebanzi
Igumbi lokuhlala: I-sofa enkulu ekhululekileyo yecandelo kunye ne-flatscreen ye-4K yeTV enokufikelela kuthungelwano lokusasaza
Isofa enye egobe ngokupheleleyo kunye noomatrasi omnye owongezelelweyo
Iifestile ezinobude obugcweleyo bomgangatho ukuya kwisilingi kunye neengcango zeglasi ezinembono yepanoramic yoLwandlekazi lwePasifiki
Imibala yabucala yazo zonke iifestile kunye nomnyango
Indawo yokuphumla kunye nepatio
Iwasha kunye nesomisi (kwabelwane phakathi kwezinye iindwendwe)
Ibhedi enkulu eyi-1, umatrasi ompontshwayo oyi- 1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
Le yipropathi yabucala enofikelelo lwabucala. Sinabamelwane ababini, nabo baneendlela zabo zabucala.
Singundoqo kuyo yonke into esiqithini:
Isikhululo seenqwelomoya - imizuzu eyi-15
Iilwandle - imizuzu eyi-7-10
Idolophu yaseGarapan - imizuzu eyi-7
Iindawo zembali zeWWII - imizuzu eyi-10
Iikhosi zeGalufa - imizuzu eyi-7-10
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide zehlabathi - 7-10 imizuzu
Isibhedlele - imizuzu eyi-7
Umbuki zindwendwe ngu- Marivic
Sinika iindwendwe zethu ubumfihlo kuqala kwaye phambili. Kwakhona siyazingca ngokuba ngabamkeli abasabelayo nabaluncedo. Sihlala kwipropathi kwiyunithi eyahlukileyo kwaye sifumaneka ngefowuni (ngazo zonke iiyure) ukuba kukho imiba evela ngexesha lokuhlala kwakho. Sikwanovuyo lokubonelela ngeengcebiso malunga neendawo zokutyela, iivenkile, iilwandle, iindlela zokuhamba intaba, kunye neminye imisebenzi yesiqithi.
Sinika iindwendwe zethu ubumfihlo kuqala kwaye phambili. Kwakhona siyazingca ngokuba ngabamkeli abasabelayo nabaluncedo. Sihlala kwipropathi kwiyunithi eyahlukileyo kwaye sifumanek…